Fiainana mpilalao baolina kitra :: Miady amin’ny tsimok’aretina Covid-19 koa i Bapasy • AoRaha
Anjaran-dRazakanantenaina Pascal fantatra amin’ny solon’anarana hoe Bapasy, miaraka amin’ireo mpiaramilalao baolina kitra aminy ao amin’ny JS Saint Pierre La Reunion, no manoro hevitra indray ny mpiray tanindra zana eto Madagasikara amin’ny fiadiana ny tsy hiparitahan’ny valanaretina “coronavirus”. Tsikaritra tokoa ny fahavitrihan’ireo mpilalao mandrafitra ny Barea amin’ny fanentana na ny Malagasy mba ho mailo manoloana ny fihanaky ny aretina coronavirus. Fihetsika sy hafatra manaporofo fa tsy kilalao io valanaretina io ka ny fanekena sady fanarahana amin’ny antsakany sy andavany an’ireo fepetra apetraky ny fanjakana no hery lehibe hifehezana ny fiparitahan’ ny tsimok’aretina Covid-19.
Raha ireo mpilalao mandrafitra ny Barea mila ravinahitra any Eoropa hatrany no nanentana hatramin’izay, dia anjaran’ireo mpilalao atsy amin’ny nosy rahavavy La Reunion, izay tarihin’i Bapasy ka ampian’i Ibrahim Dabo sy Mamy Gervais, no nanome ny fanentanana amin’ny fiadiana ny tsimok’aretina Covid-19.
“Valanaretina anisan’ny mamono olona betsaka indrindra maneran-tany ny ”coronavirus”. Ilaina mihitsy ny fiaraha-mientan’ny rehetra hiady amin’ity aretina ity. Ny fihibohana an-trano aloha no tena zava-dehibe amin’ izao fotoana izao”, hoy ny vodilaharan’ny Barea Madagasikara, Bapasy.
“Mila manaraka ny fepetra rehetra omen’ny fitondrampanjakana isika mba haha fahana miaro ny tsy fiparita hany amin’ny mpiarabelona amintsika”, hoy kosa ilay mpiandry tsatokazon’ ny Barea, Ibrahima Dabo.
Nanafatrafatra farany kosa ny amin’ny fihetsika rehetra tsy maintsy hatao isan’andro i Mamy Gervais, dia ny fanasana tanana amin’ ny savony matetika, sy ny tsy fikitihana ny orona sy ny vava, ary indrindra ny fialana amin’ny fandrorana miampy ny fanajana ny elanelana iray metatra amin’ny manodidina.
Anisan’ny manaraka hatrany ny fihibohana ao amin’ny nosy La Reunion ireto mpilalaon’ny Barea Madagasikara ireto amin’izao fotoana izao, satria anisan’ ny efa tongan’ny “corona virus” koa ity nosy ity.
Fanomanana fanadinana Hanaraka fiofanana ny teknisiana malagasin’ny Taekwondo
Lalaon’ny oniversite Ankatso :: Voahilika ireo sekoly ambony tsy miankina
Baolina kitra – Can sy mondial :: Mila mivonona hatrany ny Barea